New Myanmar Foundation: ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်းဒေသ )မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ( ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ)( နိဂုံးအပိုင်း )
*Welcome To New Myanmar Foundation*............................................... *Thank You For Your Interest & Participation*
ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်းဒေသ )မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ( ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ)( နိဂုံးအပိုင်း )
လိုင်စင်တောင် ပါဂျောင်စခန်းမှ ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ (ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ) ( နိဂုံးအပိုင်း ) ရန်ကုန်က
ပြည့်စိုးနိုင်ဆိုရင်ကျင်ချောင်းကို ကျင်စက်တပ်ပြီး ရှော့ရိုက်တာခံရလို့ပွဲချင်းပြီးဘဲ။ အောင်မိုး ကတော့ ထောင်ထဲမှာ ကြိုးဖြုတ်တယ်ဆိုပြီး မီးဒုတ်နဲ့လက်ဖျန်ကိုတနေရာတည်းထပ်ကာထပ်ကာ ရိုက်ကြ တဲ့အတွက်အတွင်းကြေကြေပြီး ပုပ်စော်နံလာကာ လက်ဖြတ်လိုက်ရပါသည်။ တရုတ်ပြည် ရင်ခြမ်း ကနေတောခိုလာတဲ့ ရာကွတ်ဘိုင်ကိုလည်း ထောင်ထဲမှ ကြိုးဖြုတ်ဖို့ စွပ်စွဲပြီး လက်ဖျန်ကို ဒါးဦးနဲ့ထောက် ပြီးလှုည့်သွင်းတာပေါက်ထွက်သွားပြီး
သွေးအများကြီးထွက်လို့ နောက်နေ့မှာ သေဆုံးသွားပါသည်။
(ဗန်းမော်) ကို အမ် ၂၀ သေနတ်နဲ့ မျက်နှာကိုရိုက်နှက်ပြီး နားရွက်ကိုကိုတိုင်မှာကပ်ပြီး ဒါးဦး နဲ့ထိုးဖောက်တဲ့အပြင် နားခေါင်းကိုသံချိပ်နဲ့ ချိတ်ဆွဲပြီး ခြေဖျားထောက်တဲ့အနေအထားထိ ဆွဲတင်ကာ ချီ ထားပါသည်။ ဒါတင်မကသေးပဲ ပါးစပ်ကိုဟခိုင်းပြီး ၀ါယာကြိုးကိုကိုက်ခိုင်းထားကာ လျှပ်စစ်လွှတ်တဲ့ အတွက် နေရာမှာပွဲချင်းပြီးသေးပါရော။ တင်မောင်အေး (ခ) အားစိုက် (ကသာ)၊ ဌေးဝင်းမြင့်တို့ နေ မကောင်း သဖြင့် KIA ဆေးရုံတက်နေရာကရောဂါပျောက်ပြီ လာခေါ်ပါဟု ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားရာ တဖက်ကနားထောင်သူကပျောက်သွားတယ်ဟုကြားသဖြင့် သေဒဏ်အမိန့်စာထုတ်ပြီး လိုက်ရှာရာ ဆေးရုံ မှာတွေ့ ရတာကို ပြန်ခေါ်လာပြီး လမ်းမှာပင်သတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။
၀င်းအောင် ဗန်းမော်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေI စခန်းမှာအစောင့်ထားခဲ့ရာ စစ်တပ်က သတ်ပစ်ပါသည်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ ကိုချိုကြီးတို့သုံးယောက်မက လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှာ ကြိုးတုတ်ခံရသည်။ ရိုးရိုးမဟုတ်ပါ။ ခင်ချိုဦးနှင့်အတူ အလွန်အေးပြီးရေခဲနေတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တုံးလုံးနှင့် ထားပါသည်။ နှိပ်စက်မှုမျိုးစုံကိုတော့ ကုန်ဆုံးအောင် မဖော်ပြနိုင်တော့ပါ။
နန်းစောဆိုသူမိန်းခလေးကတော့ မိန်းမတံဆာထဲကို နံပါတ်ဒုတ်နှင့်ထိုးထဲ့သဖြင့်သားအိမ်ကွဲသွားပြီးတသက် လုံးဝေ ဒနာခံစားနေရပါ၏။
(ခရိုင်မှူး၊ မန္တလေး ကို ဆွဲခေါ်သွားကြပြီး ၃ ရက်အကြာမှာတော့ပျောက်သွားပါသည်။ ရဲလင်း (ခရိုင်မှူး၊ ရန်ကုန်) ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်မှုမျိုးစုံခံနေရသည်ကို မိဘများသိရှိကာ လိုက်လာပြီး ခံဝန်ဂတိပေး ကာခေါ်သွားပါသည်။ ၀ဏ္ဍဇော်(ရန်ကုန်)၊ ဘိုဘို(ရန်ကုန်)၊အောင်ကျော်စိုး (သာယာဝတီ)၊ ညီညီ (မန္တလေး) တို့အားလုံး မိဘများလာရောက်ခံဝန်ဂတိထိုးကာပြန်ခေါ်သွားကြသည်။ နန်းအောင်ထွေးကြည်ကို KIA မှအာမခံကာခေါ်သွား၏။
သံချောင်းကိုမီးဖုတ်ပြီး ဒူးခေါင်းကိုထိုးတဲ့အတွက်လမ်းကောင်းကောင်း မလျှောက်နိုင်တော့ပါ။သို့နှင့်အားမရသေးဘဲအဆိပ်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးစက်တောင်းပြန်ပါသည်။
ကိုထွန်းအောင်ကျော် က ကျနော့်မှာမရှိဘူးလို့ပြောတော့ မရဘူး။ကိုထွန်းအောင်ကျော်က အချိန်ဆွဲပြီး သူ န၀တသူလျှိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို KIAနားလည်အောင်ကြိုးစားပေမယ့် KIAကမကာကွယ်ဘဲမ သိယောင် ဆောင်နေ ခဲ့ပါသည်။ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို နှိပ်စက်ပုံမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော် လမ်းနည်းနည်းလျှောက်
့လှေခါးက၀ါးတွေကိုပြောင်းပြန်လုပ်ထားသည်။ အဲဒီအပေါ်ကို ဖင်ဒရွတ်ဆွဲပြီးတက်နေတဲ့ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ကန်ချလိုက်တော့ ဒလိန့်ခေါက်ခွေးကျသွားပါသည်။၀ါးငုတ်တွေပေါ်ကျတဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် အိပ်ယာပေါ်ကမထနိုင်တော့ပါ။ သူ့ညီရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖြတ်ပြီး ပါးစပ်ထဲမှာကိုက်
ခိုင်းထား၏။ ကျနော်ငိုချင်လာတဲ့အထိ ရင်ထဲမှာထိခိုက်စွာခံစားရပါသည်။ အားလုံးမြင်နေရပေမယ့် ကိုယ်တိုင်လည်း အနှိပ်စက်ခံနေရကြရာမို့ တယောက်ကိုတယောက် မကယ်နိုင်ကြပါပေ။နောက်ဆုံးမှာ ကိုထွန်းအောင်ကျော်က အားလုံးထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ပါဘူး ကျနော်တယောက်တည်းသာထောက် လှမ်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးအသက်ပေးသွားပါသည်။ မျိုးဝင်းကိုယ်တိုင် ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို ဒါးနဲ့ခုတ် သတ်လိုက်တာပါ။
ကိုထွန်းအောင်ကျော်ကို အလွန်လေးစားမိပါသည်။ ကျနော်မသေသေးသမျှ အမှန်တရားတွေကို
ကတ်တရာလိပ် (ရင်ဘောင်ခြမ်း) ကို စက္ကူပတ် မီးရှို့ပြီး ဗိုက်ပေါ်တင် စစ်ဆေးပါသည်။ မသေခင်တရက်မှာ ညီအကိုနှစ်ယောက်ကို တပြိုင်တည်းခေါ်ပြီး ချိုကြီးရဲ့ညာဘက် လက်ကောက်ဝတ်ကိုဖြတ်ပြီး လက်ဖ၀ါးကိုဒါးဦးချွန်နဲ့ထိုးကာ အကိုဖြစ်သူ ကိုထွန်းအောင်ကျော်ရဲ့ ပါးစပ်ထဲ ကိုထဲ့ပြီး ကိုက်ခိုင်းထားပါသည်။ လက်သဲခွန်ထဲကိုသံချောင်းတွေရိုက်ထဲ့ထားပါသည်။
မင်းသိန်းကတော့ အချုပ်ထဲမှာဘဲ လှမျိုးအောင်ကနံချပ်ကူနဲ့ရိုက်လို့သေသွားသည်။
ဗဟိုကလိုက်သတ်တော့ သူ့အဖေကိုသာတွေ့လို့ အဖေကိုသတ်ပစ် ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ဦးမိုးလည်း အလင်းပြန်ဝင်တာသိလို့ အသတ်ခံရပါသည်။မောင်မောင်ကြွယ် (ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းမွေးစားသား) ကတော့ ဖမ်းဆီးအနှိပ်စက်ခံရပြီး ၁၉၉၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့ မှာအဖမ်းခံရသူတွေထဲမှာ ၁၄ ယောက်ကိုရွေးထုတ်ကာသတ်ပစ်ကြပါသည်။
၂။ ကိုချိုကြီး (မန္တလေး)
၉။ ခင်ချိုဦး(မန္တလေး NLD)
၁၀။ တပ်ကြပ်ကြီး တူးတူး(မြစ်ကြီးနား)
အားလုံးကို ငါးယောက်တကျင်းမြှုပ်ပြီး ခင်ချိုဦးက တကျင်းဖြစ်ပါသည်။သေသွားသည်ကို
ပင် မိန်းမအင်္ဂါထဲ ဒုတ်ထဲ့ပြီးမြှုပ်ပါသည်။
ဗဟိုမှ တတိယအကြိမ်စည်းရုံးရေးအတွက် လာရောက်သူဒေါက်တာ
နိုင်အောင် (ယခု NDD) နှင့်အတူ လှဌေးလည်းပါလာပါသည်။ဒေါက်တာနိုင်အောင်က ကျနော်တို့
အချုပ်ခန်းကိုလာကြည့်ရာ အချုပ်ခန်းရှေ့ဝါးခင်းပေါ်ခြေထောက်တင်ပြီး “ဒီကောင်တွေသတ်ပစ်
လိုက် ငါတာဝန်ယူတယ်”ဟုအမိန့်ပေးရင်းသခင်အားရ ကျွန်ပါးဝ လုပ်သွားပါသည်။ သူ ဥက္ကဌ
ဖြစ်ရေးကို အရေးထားပြီး မဲပေးမည့်ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်သွားခြင်းပါ။
တတိယအကြိမ် ညီလာခံမှာ အရှက်နည်းစွာဖြင့် ဥက္ကဌတာဝန်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။နောက်
ပိုင်းတွင်လည်း ABSDFတောင်ပိုင်းအထိ အဲဒီထောက်လှမ်းရေးဆိုပြီး ဖမ်းတဲ့ရောဂါပို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါ
သည်။ ဒီလုပ်ရပ်များက ဗကပ ၏ဖြုတ်ထုတ်သတ်ထက် ABSDF ကအပုံကြီးသာသွားပါသည်။ ဒါ
ကြောင့် ABSDF ဟာနိုင်ငံရေးမှာ တ၀က်လောက်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတက်လာတဲ့ ဥက္ကဌတွေ
အနေနဲ့ ခုချိန်ထိ ဒီဒဏ်ကိုခံနေရစဲပါ။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် န၀တထောက်လှမ်းရေးဟု စွပ်စွဲခြင်းခံရသူများစာရင်း
၁။ ထွန်းအောင်ကျော် - မန္တလေး - (သေဆုံး)
၂။ ချိုကြီး ။ ။
၄။ ရာပြည့် (ခ) ခင်မောင်တင့်
၅။ စိန်ဝင်း (သေဆုံး)
၆။ ထိန်လင်း - ရန်ကုန်
၇။ လွင်မင်းသန့် (ထိန်လင်း) - မန္တလေး
၁၁။ ရဲလင်း - ရန်ကုန်
၁၅။ နန်းအောင်ထွေးကြည် (မငယ်)
၃၅။ အားစိုက် (တင်မောင်အေး) -သေဆုံး
၃၇။ မိုးဇော်အောင် ။
၄၀။ကျော်ကျော်ဦး (မုံရွာ) ။
၄၂။ ဦးသောင်းမြင့် ။
၄၃။ ဦးစိန် ။
၄၄။ကျော်ကျော်ဦး (တဇယ်) ။
၄၆။ သန့်စင်မိုး (အီနွတ်)
၅၇။ နိုင်အောင် PSLP
၆၁။ ထိန်လင်း (ဘောကြီး)
၆၂။ သာဓု (သေဆုံး)
၆၃။ ခင်ချိုဦး -သေဆုံး
၆၄။ တူးတူး (မိုးညှင်း)
၆၇။ ဦးမင်းအောင် -သေဆုံး
၆၈။ တူးတူး (မြစ်ကြီးနား) ။
၆၉။ စံမျိုးအောင် ။
၇၀။ ရန်အောင် ။
၇၁။ မျိုးသန်းဦး ။
၈၂။ လှမြင့် -သေဆုံး
၈၆။ တင့်လွင် -သေဆုံး
၈၈။ ရာကွတ်ဘိုင် ။
၈၉။ ခင်မောင်စိုး ။
၉၁။ ၀င်းနောင် ။
၉၂။ ၀င်းသိန်း ။
၉၇။ စိုးဝင်းသန်း ။
၉၈။ ဂမ်မလိ (ဖခင်အသတ်ခံရသည်)
၉၉။ စိုးကြိုင် (ပြည်တွင်းမှာအသတ်ခံရသည်)
ကျနော့်အနေနှင့်သေဆုံး-အနှိပ်စက်ခံရသူတွေဟာထောက်လှမ်းရေး မဟုတ်ကြောင်း ယခုလိုအနှစ် ၂၀ ကာ လ မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပြီဆိုတာကို တင်ပြချင်ပါသည်။
၂။ သံချောင်း (CS) (သာယာဝတီ ထောင်)
၃။ မျိူးဝင်း (BCS) (သေဆုံး)
၆။ လှဆိုင်း (ဘဏ္ဍရေး)
၇။ စိန်အေး (စည်းရုံးရေး)
၈။အောင်သန်း (ဘဂျမ်း) ၇၀၁ တပ်ရင်းမှူး
၉။အောင်ဆွေဦး ၇၀၂ တပ်ရင်းမှူး
၁၀။ သိုက်ထွန်းဦး ၅၀၁ တပ်ရင်းမှူး
၁၅။ သန်းဇော် (မန္တလေး)
၄င်းတို့အပြင် ABSDF ဗဟိုမှဒေါက်တာနိုင်အောင် (NDD) တို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ထပ် တာဝန်ရှိသူများစာရင်းကို ထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါသည်။
၁။ ထွန်းအောင်ကျော် (ဥက္ကဌ)
၂။ သံချောင်း (ဒု ။ ) စစ်ရေးတာဝန်ခံ
၃။ မျိုးဝင်း ( ။ )တွဲဘက်စစ်ရေးတာဝန်ခံ
၇။ ဒူဝါလှဆိုင်း (ဘဏ္ဍာရေး)
၉။ ဦးစိန် (နိုင်ငံရေးနှင့်စည်းရုံးရေး)
၁၀။ ညီညီကျော် (ဗန်းမော်ခရိုင်မှူး)
၁၁။ ရဲလင်း (ရွှေဂူခရိုင်မှူး)
၁၂။ ဗဂျမ်း (အောင်သန်း) ၇၀၂ တပ်ရင်းမှူး
၁၃။အောင်ဆွေဦး ၇၀၁ တပ်ရင်းမှူး
၁၄။ စိန်အေး (စည်းရုံးရေး)
အထက်ဖော်ပြပါစာရင်းမှလူများမှာ ABSDF ကချင်(မြောက်ပိုင်း)ကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြပြီး
ကျော်ကျော် (ယခင်ဥက္ကဌ ) လှဌေး (စစ်ကိုင်းတိုင်း) နှင့် စိုးလင်း(နိုင်ငံရေးနှင့်စည်းရုံးရေး)တို့ 
။ ရာစုနှစ် နှစ်ခုကျော်လာပြီဆိုတော့ အမှန်တကယ်ထောက်လှမ်းရေးဟုတ်မဟုတ်ခွဲခြားလို့ ရပြီပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့အပြစ်မဲ့သေဆုံးသွားသူတွေအတွက် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူစဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်)
by Maung Maung Wann on Thursday, January 19, 2012 at 7:45pm
ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ (ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ) ( နိဂုံးအပိုင်း )
*၁၆ပဲရည် ရွှေဈေး တကျပ်သား ၆၉၇၀၀၀ ကျပ်/
*၁၅ပဲရည် ရွှေဈေး တကျပ်သား ၆၅၀၀၀၀ ကျပ်/
*အမေ၇ိကန်တဒေါ်လာ ၈၃၅ ကျပ် - ၈၄၅ ကျပ်/
*အက်အီးစီတယူနစ် ၈၃၅ ကျပ် - ၈၄၅ ကျပ်/
*စင်ကာပူဒေါ်လာ ၆၅၃ ကျပ် - ၆၆၃ ကျပ်/
*ထိုင်းဘတ်ငွေ ၂၆ ကျပ် - ၂၇ ကျပ်/
*မလေးရင်းဂစ် ၂၆၈ ကျပ် - ၂၆၉ ကျပ်/
*ယူရိုငွေ ၁၀၄၇ ကျပ် - ၁၀၆၂ ကျပ်
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း - ၁ - ၂ - ၃ - ၄ - ၅))
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း- ၁) ရေးသူ- (ကို)အောင်မိုးဝင်း Wednesday, 21 December 2011 (က)ေ...
ရော်နယ်အောင်နိုင့် အင်တာဗျူး (ဘာသာပြန်)ရော်နယ်အောင်နိုင် လူသတ်ကြောင်း ၀န်ခံပြီ
ရော်နယ်အောင်နိုင့် အင်တာဗျူး (ဘာသာပြန်) နယ်စပ်မှာ ဂျာနယ်လစ်သင်တန်းပေးတော့ ဗမာ၊ကရင်စကားပြန်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရပါ...
မိုးသီး အမိန့် ပေးတာလား လိုင်စင်တောင် ပါဂျောင်စခန်းမှ ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ(အပိုင်း ၁ )
မိုးသီး အမိန့် ပေးတာလား လိုင်စင်တောင် ပါဂျောင်စခန်းမှ ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ(အပိုင်း ၁ ) ဒီစာနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားစေ...
မိန်းခလေးငယ်တစ်ယောက်၏ဘဝအကြောင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်းဒေသ )မှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ( ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ) (အပိုင်း - ၁ )
လိုင်စင်တောင် ပါဂျောင်စခန်းမှ ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ ( ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ) (အပိုင်း - ၁ ) by Maung Maung Wann on Tues...
Thank you for your interest & participation. Our foundation is donating money , clothes , stationary , medicine, supporting in education & health to poor children , villages & monasteries & teachers in various parts of country . Every organization & group can join us . We warmly welcome all of you & serve for you .We are planning to give some trainings to members & teachers & children in some remote areas . Invite for volunteers .
၂ဝ၁၅ အကြို မြင်ကွင်း
၂ဝ၁၅ ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ သမ္မတသက်တမ်း ကုန်ပါပြီ။
နောက်တယောက်ကို ရွေးကြမှာပါ။ ၂ဝ၁၅ က မကြာခင်မှာ ခုန်ပေါက်ပြီး ရောက်လာတော့မှာပါ။
ပါကစ္စတန်ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေကို ရိုက်ခွင့်မရှိ
မကြာခင်တုန်းပဲ ပါကစ္စတန်လွှတ်တော်က ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေကို ရိုက်နှက် ဆုံးမတာကို တားဆီးတဲ့ဥပဒေကို အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကလေးတွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာန...
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၉-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၈ နှစ်ပြည့်ပြီ (အသံ) click
- ၆၈ (ကဗျာ) click
- စစ်တပ်နှင့်တွဲပြီး အခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင...
လူသားတို့သည် အတိတ်ကို တူးဆွလိုသော ဆန္ဒမရှိကြပေ။ အနာ ဂတ်၏ လားရာဘက်သည် ဖြောင့် ဖြူးသာယာသော ခရီးလမ်းများသာ ဖြစ်လိုကြသည်။ လူသားတို့ အသက် ရှင်နေကြ ရသည်မှာ သဘာဝတရ...
*ပြည်သူ့ဆန္ဒ ပြည်သူ့စွမ်းအားဖြင့် အခြေခံဥပဒေသစ်ရေးဆွဲရေး*
*တူမောင်ညို (၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၉ ရက်)*
အမျိုးစောင့် ဥပဒေနဲ့ အမျိုးစောင့်ဖို့ ကြိုးစားတာထက် မြန်မာပြည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်စစ်တွေ တိုးပွားအောင် ကြိုးစားပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ...
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်
2013-06-18 ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ့ရစဉ် photo: RFA/ Myo Thant အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက် Graffiti ပညာရှင်အာကာကျော်ရဲ့ လက်ရာ (ရုပ်/သံ)-ဓာတ်ပုံ
အမေ့အတွက် surprise! ဖြစ်စေမဲ့ အာကာကျော်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင် လက်ရာပါ. 19-6-2013 နေ့မှာကျရောက်မယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ 68 နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ်...
ဦးရွှေမန်း မိန့် ခွန်း
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၈) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အား စည်ကားစွာ ကျင်းပ (သြစတြေးလျနိုင်ငံ)။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ မဲဘန်းမြို့ နေ မြန်မာမိသားစုများ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများမှ ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၈) နှစ်မြောက်မွေးနေ့ အား စည်ကားစွာ...
ဥက္ကံ မငြိမ်သက် မှု အတွက် အမျိုးသမီး နှစ်ဦး ကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်
မေလ ၁ ရက် နေ့က ဥက္ကံ မြို့ပေါ် တွင် ကိုရင် တစ်ပါး ကို စက်ဘီး ဖြင့် တိုက် မိရာ မှာ ပဋိပက္ခ ကျယ် ပြန့် မှု အသွင် ကို ဆောင် စေ ခဲ့ သည့် မြို့ခံ အမျိုးသမီး ...
*ကောင်းမြတ်သူ (မူဝါဒရေးရာဌာန)*
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်သူ များအားလုံး အခုတော့လည်း ရွေးကောက်ပွဲမှရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ် ကုန်ကြပြန် ပါပြီ။ ၂၀၁၀ ကိုသပိတ်...
သူလိုကိုယ်လို … နားလည်မှု
အခုတလော … လူတွေကြားထဲမှာ အတုတွေကပေါတယ် ဒါက [...]
google-site-verification: google1df48c51c26cebb2.html Summary Rest of your post3months ago
*ကမ္ဘာ့သတင်းများ ** 26/10/2012*
နိုင်ငံတကာသတင်း ရခိုင်ပြဿနာ ကုလစိုးရိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အခုလောလောဆယ် ဖြစ်ပွားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အလွန်ဆိုးဝါးနေ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလနှင့် အတိုက်အခံပါတီများမှ လွတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်များ ၁၀၂ ဦးအထိ ရှိလာ
by General Knowledge on Sunday, April 8, 2012 at 5:29am ·
*Sunday, 08 April 2012 01:23*
*ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ...
ကရင်နီ မျိုးနွယ်စုတို့ဟာ ဘိုးဘွားဘီဘေ လက်ထက်ကတည်းက ယုံကြည်တဲ့ ဓလေ့ရိုးရာပွဲ ဖြစ်တဲ့ ကေးထျိုးဘိုး ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပလာခဲ့ပြီး ထိုင်းမြန်...
ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့ KNPP တို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှု လက်မှတ်ထိုးကြမည်ဆိုလျှင်...
စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံရှိထားတဲ့ ဗမာအစိုးရနဲ့ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ KNPP တို့ နောက်တကြော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်မယ်ဆိုရင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်က အဖြစ်အပျက်ေ...
[image: သရုပျ​ဖျေါပုံ © PMV]
အိမျထောငျစုတဈစုဟာ နေ့စဉျရကျဆကျ တကကျြကကျြနဲ့ အိမျထောငျမသာယာဘူးဆိုရငျ
တရုတ် အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ၀မ်ကျားပေါင်း နှင့် မြန်မာ ဒု သမ္မတ တင်အောင်မြင့်ဦး တို့တွေ့ဆုံ ချိန် ဉ် တရုတ် စစ်တပ် မှ ထိပ်တန်း စစ်ဘက် အရာ ရှိ များ က မြ...
HACK BY BHG [image: bhg]
Greetz : Dr.RAT,Admin Kill3r, Mr.N00b, H4ck3...
ဒီမိုကရေစီမိခင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမည်ရှိစာအုပ် မေတ္တာဖြင့် ဖြန့်ပြီ
“ ဒီမိုကရေစီမိခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” အမည်ရှိစာအုပ်ကို စာရေးဆရာ သန်းဝင်းလှိုင် ကရေးသားပြီး BMC စောနေမင်းက ထုတ်ဝေသည့် စာမျက်နာ ၂၉၆ မျက်နာပါ ၁၀ ချိုးဆိုဒ်...
Action of NewMyanmarFoundation
( Thailand ) Training as NLD representatives
(Pre election period )
(Ten Warning Signs of Paralysis)
(စစ်မှန်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ)
(တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ)
(လွတ်လပ်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘာလဲ)
(ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသောနေ့ တွင် လေ့လာရမည့် အချက်များ စာရင်း )
19.11.2010 ( election press confrence ) New Myanmar Foundation worked as election observers in 2010 election in BAGO and Yangon division
19.11.2010 ( election press confrence ) NMF worked as election observers in 2010 election in BAGO and Yangon division
2010 Burma Election Record
2010 New Myanmar Foundation
2010-Election ResultsaJoke
2011 Donation (New Myanmar foundation)
2011 New Myanmar Foundation
40 Injured in Bomb Blast at Karen Festival (Myanmar News)
88-Generation students brief FM Hague ( Myanmar News )
88-Generation Students met with opposition leader Aung San Suu Kyi
A man offers pictures of independence hero General Aung San with his daughter
About Election Observers
About Election Observers ANFREL’s activities
an invitation to attend the Environmental Working Group Meeting coming Friday
ANFREL Observation and Reporting Guidelines
ANFREL Observation and Reporting Guidelines Pre-Election Day
Appointment with French journalist ( 2011
as observers (New Myanmar Foundation)
Aug7to 15 ( Thailand ) Training as NLD representatives
British Embassy - New GDP guidelines
Call for Applicants Ewha Global Empowerment Program (2011 Winter)
Charity Party )
Complaint Handling and Response Mechanism/Feedback System (T3
Debate and Public Speaking Training
Disappointment at prison term cuts
Discussion and relaxation at Batataung Pagoda ( Bayda Institute and New Myanmar Foundation )
Donation (members of New Myanmar Foundation)
Donation and Volunteer Services (members of New Myanmar Foundation)
Donation inamonastery
Donation of books from New Myanmar Foundation to NLD office
Dr ကောင်းမြတ်ကျော်ဘာသာ ပြန်သည်။
Election Day Observation Checklist
ELection observations ( cartoon)
Election observations in Myanmar
Environmental Working Group Meeting
EU Sanctions Remain Until Burmese Prisoner Release: Hague ( Myanmar News )
Family members of Burmese prisoners sit behind barricades and wait in front of Burma's notorious Insein prison in Rangoon on Jan. 3.
Food shortage threatens Kachin refugees ( Myanmar News )
George Soros to open first Burma office
Good Governance and the Role of Civil Society' Dr Nay Win Maung
Good Governance and the Role of LNGOs (Dr. Htein Win)
group photo of members of New Myanmar Foundation and teachers from orphanage school
Health Care Assistant Training batch-3
I want to see Burma
Invitation (Sharing Learning Workshop of Bottom-up Participatory Planning on DRR) ( 20 Oct
Invitation from DRR Working Group 's Workshop (22.11.2011)
Invitation from DRR Working Group ( 18
Invitation from Fun Raising Fair
Invitation to meet Peter Britton from Australian Volunteers International (AVI) at 9
Invitatioon from Green Cafe ( 7th Jan
invite you to attend the National Level Seminar on Lessons Learnt and Good Practices on CBDRR.
Kachin refugees flee fighting between KIA and government troops.Ending Kachin Conflict ‘Important’: Suu Kyi
Karen Rebels Deny SigningaCease-Fire
KIA troops stand at attention duringamilitary drill atabase in Kachin State. Burmese Troops Overrun Kachin Base
KNU ဆက် ဆံ ရေး ရုံး ဖွင့် ပွဲ ( မြ၀တီ ၊ ကရင် ပြည် နယ် )
members of New Myanmar Foundation
Members of NewMyanmarFoundation( at meeting of Bayda Institute
members of NMF in National youth Network ( discussion
Mon Photographer Opens Eyes to Child Poverty
my country. But it’s not safe for us there
Myanmar Network for free Election ( MYNFREL )Reports for Bago Division
NDF ပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
New Myanmar Foundation ( meeting minutes) အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
New Year party with members(NMF)
NMF 2011 Expenses ( August -December )
Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi (41st Annual Meeting of the World Economic Forum )
Political Dissidents Released in Govt Amnesty(Myanmar News)
possibility of polling day event
Potential problems in Asian Elections BEFORE POLLING DAY
pro-democracy leader Aung San Suu Kyi in central Rangoon Burma ‘not yet independent’: 1948 veterans
Report of Magway Region Pre-Election Observation
Reports(election) for Bago Division
Roundtable in Burma
Sanctions on Burma to remain: Hague ( Myanmar News )
SGPA scholarship form for 2012-2013
Teaching Methods for Teachers ( From Maukkha )
Thanks to partners and members for their volunteer services(NMF)
The Moment of Triumph for Burma's Dissidents(Myanmar News)
Training Policy of NewMyanmarFoundation
Training Program in Magwe Division
Trip to Mandalay division and networking with CSOs (members of New Myanmar Foundation)
Two Weeks Meeting Schedule and Call for 3W Support Session
Upcoming Core Principle Course(AC
Vocabulary on Election English Burmese
Voters queue atapolling station in Bago division (DVB) Voting infractions ‘wouldn’t alter result’
Yangon Election Day Report2Burmese
ကယန်း အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား
ကိုမင်းကိုနိူင်၏ ရှစ်လေးလုံး ငွေရတုအကြို (၂၄)နှစ်မြောက် အမှတ်တရစကား
စစ်ကုန်သည်ကြီးများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဆရာများအတွက်စာသင်ကြားနည်းသင်တန်းများ NEW MYANMAR FOUNDATION
ဇွတ်မညှိနဲ့ မတူတာကို လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစား (လူထုစိန်ဝင်း )
တန် ဆေး၊ လွန် ဘေး
တပ်ပြေးကို ကူညီတဲ့ ပြည်သူတွေကို ထောင်ချ
ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ( ထင်လင်းအောင် ၏ အစီရင်ခံစာ) (အပိုင်း - ၁ )
နိုင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအတွက် ကျင့်ဝတ်များ
မိုးသီး အမိန့် ပေးတာလား ရင်နင့်ဘွယ်ဖြစ်ရပ်များ
လူငယ်တွေအတွက် မရှိမဖြစ်အရာနှစ်မျိုး - လူထုစိန်ဝင်း
သတင်း နဲ့ မြင်ကွင်း အပြည့်အစုံကို ရုပ်သံမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
သူကြွယ်ကြီး George Soros ရဲ့ အတွေးအမြင်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း New Myanmar Foundation
အစိုးရကမိဘလား ပြည်သူကမိဘလား--- ဆရာလူထုစိန်ဝင်း
အမျိုးသမီးထက် အမျိုးသားက လည်ချောင်းကင်ဆာဖြစ်တာ ၆ ဆလောက်ပိုတယ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကြီးဆုံး တီဟာထောင် တွင်းမှ သစ္စာတရား ရှာဖွေကြပုံများ
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား မြန်မာခရီးစဉ်
ဦးဂမ္ဘီရ ကို ပြန်လည် ဖမ်းဆီး
ဧရာဝတီ ၃ မြို့နယ်တွင် စက်မှုဇုန် တည်မည်
ရွေးကောက်ပွဲပညာပေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်
ရွေးကောက်မခံ လွှတ်တော် အမတ်များပါတဲ့ CNN ရုပ်သံ
ရွေး​ကောက်ပွဲဝင်​ရေး​နဲ့​ပါတီနိုင်ငံ​ရေး​ကို ဆန့်​ကျင်တာ မဟုတ်ဘူး
မြောက်ပိုင်းလူသတ်မှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင် ဖွဲ့ပြီ
မြောက်ပိုင်းဒေသ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း- ၁၀- )
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း ၈ )
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း-၇-)
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ ( အပိုင်း-၉-)
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း-၆-)
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း - ၁ - ၂ - ၃ - ၄ - ၅)
မြောက်ပိုင်းမြေမှ ပုံရိပ်များ ( အပိုင်း - ၁ - ၂ )
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် အတွဲ ၂ အမှတ် ၅၃ ပါ ဆရာဝင်းထွဋ်ဇော်ရဲ့ အတွေးဆောင်းပါး
မြန်မာ့မီးရထားသို့ ပစ်စာ၊တိုင်စာများနှင့် ပတ်သတ်သည့် ထုတ်ပြန်စာ
၂၀၁၂ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်၇စာ၇င်း
၈၈၈၈အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအကြို ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး အရှိန်အဟုန်မြင့် ဆောင်ရွက် (Myanmar News)
“ နွေဦးသန့်လျှင် မြစ်သန့်သည် ”
“Metta Campaign “
Nobel Peace Prize winner Aung San Suu Kyi (41st A...
' Protection of Women at Work ''
"Photo Essay Training”
Dear DRR Working Group members
NFE Working Group
Mandalay & Pyin Oo Lwin Trip ( 21.1.2012 )
ရော်နယ်အောင်နိုင့် အင်တာဗျူး (ဘာသာပြန်)ရော်နယ်အောင...
မြောက်ပိုင်းဒေသမှ အရိုးတွန်သံများ (အပိုင်း - ၁ - ၂...
ကျောင်းသားတပ်မတော် ( မြောက်ပိုင်းဒေသ )မှထွက်ပြေးလွ...
Justice Initiative Fellow Program
MNGO-CP Education Cluster Meeting
အဖွဲ့အစည်းအမည်အတိုကောက်များကို ပြင်ဆင်ရန်ရှိ / မရှ...
Inviting Expression of Interest (EOI) from LNGO to...
Myanmar NGO Network Environmental Working Group
The Moment of Triumph for Burma's Dissidents
Four Killed, 40 Injured in Bomb Blast at Karen Fes...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး အရှိန်အဟုန်မြင့်...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကြီးဆုံး တီဟာထောင် တွင်းမှ သစ္စာတရား...
Members of New Myanmar Foundation ( at meeting o...
Discussion & relaxation at Batataung Pagoda ( Bayd...
88-Generation students brief FM Hague
Sanctions on Burma to remain: Hague
Ending Kachin Conflict ‘Important’: Suu Kyi
‘I want to see Burma, my country. But it’s not saf...
DECLARATION OF PRINCIPLES FOR INTERNATIONAL ELECTI...
Report of Magway Region
ANFREL Observation and Reporting Guidelines Pre-E...
NEW MYANMAR FOUNDATION မှ မတ်လ ၂၀၁၁တွင် ပြုလုပ်ခဲ့...
Training Policy of New Myanmar Foundation
ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ် ဆရာဝင်းထွဋ်ဇော်ရဲ့ အတွေးဆောင်းပါ...
training on "Complaint Handling & Response Mechani...
Invitatioon from Green Cafe ( 7th Jan, 2012 )
Appointment with French journalist ( 2011, Nov )
New Year party with members(NewMyanmarFoundation))...
Invitation for "Complaint Handling & Response Mech...
ဘီလ်ကိတ်ပြောတဲ့ ဘ၀ (၁၁) ခု
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ေ...
သမဂ္ဂစိတ်ဓာတ်နဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေ မျိုးဆက်သစ်တွေဆီ လက်...
( Thailand ) Training as NLD representatives,(memb...
88-Generation Students Leaders meet with Suu Kyi
New Myanmar Foundation. Powered by Blogger.